Dhulkii ballaarnaa ee Yurub waa asalkii halyeeyo badan iyo sheekooyin cirro leh, Bbc cajiib ah, iyo tuulooyinka xafida siraha hore. U dhaw magaalooyinka badweynta ama meel ka durugsan buuraha dhaadheer, Tirada tuulooyinka quruxda badan ee xiisaha leh ee Yurub waa mid aan dhammaanayn. weli, waxaa jira 10 tuulooyin qurxoon oo ku yaal Yurub oo quruxdooda iyo sixirkoodu ay kor u qaadaan kuwa kale oo dhan.
Guryaha cad waxaa lagu qurxiyey rinjiyeyaal dhaqameed iyo qoraallada qadiimiga ah ee loo yaqaan sgraffiti. Rooma, luqadda maxalliga ah, wuu badbaaday ilaa maantana waa la hadlayaa.
Tuulada oo seexata hareeraha wabiga Moselle. Guryo nus-saacad leh iyo guryo qurux badan oo leh dariiqyo cidhiidhi ah. Xilliga dayrta, marka cawska cagaaran iyo geedaha ay xidhaan labiskooda dahabiga ah, ku darista jiidashada iyo muuqaalka muuqaalka quruxsan ee Cochem.
Hareeraha beero canab ah iyo buuraha, Tuulada Cochem waa kaamil-waraaq oo kaamil ah. Sida ugufiican ee aad kudhaqmikarto tuulada oo aad ugahadasho dhamaan muuqaalka tuulada muuqaal ahaan waa baaskiil.
St. Tuulada Genies ayaa leh astaamahayaga 10 tuulooyin qurxoon oo ku yaal Yurub oo looga mahadceliyay guryo diiran oo saqaf ah. Intaa waxaa dheer, kaniisadda qarnigii 12aad iyo qalcaddii qarnigii 13aad waxay ku yaalliin bartamaha tuulada. Waddo rogrogaysa ayaa ka tallaabi doonta tuulada iyo guryaheeda midabbada madow leh meelaha ugu caansan aragtiyada iyo goobaha.
Waxaa si weyn loogu talinayaa in la fuulo qalcadda Cesky Krumlov ee loogu talagalay bannaanka aan la ilaawi karin ee Cesky Krumlov, webiga Vltava, iyo dabeecad qurux badan oo ku xeeran gobolka Bohemia.
Adiga Waxaan rabaa in aan ku soo daabacno bartayada mareegta “10 Tuulooyinka Farshaxanka ee Yurub”Bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/?lang=so የሰማይ አካላት– (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
meelaha ugu quruxda badan qurux badan Xarumaha Fairytalet scenicvillageseurope tuulooyinka